အရငျလိုမောငျနှမစုံစုံလငျလငျနဲ့မိဘနှဈပါးကိုကနျတော့ ခှငျ့မရတဲ့အတှကျဝမျးနညျးမိကွောငျး ရငျဖှငျ့လာတဲ့ ပိုငျ တံခှနျရဲ့အဈမ – Cele Lover
သရုပျဆောငျ ပိုငျတံခှနျကတော့ မွနျမာနိုငျငံတှငျ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော ပွညျသူတှနေဲ့အတူ တဈသားတညျး ပါဝငျခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦး ဖွဈပါတယျ။ လူငယျပီပီ ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ ဘကျကနေ ပူးပေါငျးပါဝငျခဲ့တဲ့ ပိုငျတံခှနျရဲ့ စိတျထားကိုတော့ ပရိသတျတှကေ လေးစားဂုဏျယူနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ကိုတော့ ပုဒျမ ၅၀၅ (က) ဖွငျ့တရားစှဲဆိုပွီး နောကျရကျမှာဘဲ နအေိမျတှငျ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတှနေဲ့ အနုပညာရှငျ ညီအဈကိုမောငျနှမမြားက ပိုငျတံခှနျအမွနျဆုံး လှတျမွောကျရနျ သူတို့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျမြားတှငျ Speak Out လုပျပေးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ မိခငျကလညျး သားဖွဈသူရဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ စိုးရိမျပူပနျနတောပါ။ မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး ပိုငျတံခှနျရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျ အရငျလို မောငျနှမစုံစုံလငျလငျနဲ့ မိဘနှဈပါးကို မကနျတော့ရတဲ့အတှကျ ဝမျးနညျးမိကွောငျး ရငျဖှငျ့ပွောပွလာတာ ဖွဈပါတယျ။
သူမကလညျး ” မနကေ့ အမအေိ့မျကိုသှားတော့ ပိနျသှားတဲ့ အမကေို့ကွညျ့ပွီး စိတျမကောငျးဖွဈရတယျ။ အရငျလိုမောငျနှမစုံစုံလငျလငျနဲ့ အမနေဲ့အဖကေို့ မကနျတော့ရတော့ ဝမျးနညျးခကျြက ပွောမပွတတျဘူး။
ပိုငျ…နငျ့ကို အရမျးသတိရတာပဲ။ အဆငျရောပွရေဲ့လား?
နငျရှိရငျ ပြျောရမှာ။ အိမျကလညျး ဆူညံနမှော။ အခုတော့ တိတျဆိတျပွီး ပူပငျသောကမကျြနှာတှနေဲ့။ တို့အမလေညျး နမေကောငျးဘူးဟ။
ကိုယျ့မောငျကို စိတျပူတာက တဈမြိုး၊ အမကေို့ စိတျပူရတာက တဈမြိုးနဲ့ အိပျမရတဲ့ရကျတှလေညျး မြားခဲ့ပွီ။ စိတျရှုပျစရာတှေ မြားလှနျးလို့ ကိုယျပါ မလဲကသြှားဖို့ အားတငျးထားရတယျ။ ဒီကာလဆိုးကနေ အမွနျဆုံးလှတျမွောကျပါရစတေော့ဗြာ😔” ဆိုပွီး ဝမျးနညျးစှာ နဲ့ ရေး သား ထားတာပါ။
အရင်လိုမောင်နှမစုံစုံလင်လင်နဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုကန်တော့ ခွင့်မရတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းမိကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ပိုင် တံခွန်ရဲ့အစ်မ
သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်း ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်ပီပီ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ စိတ်ထားကိုတော့ ပရိသတ်တွေက လေးစားဂုဏ်ယူနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့်တရားစွဲဆိုပြီး နောက်ရက်မှာဘဲ နေအိမ်တွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေနဲ့ အနုပညာရှင် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများက ပိုင်တံခွန်အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ရန် သူတို့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်များတွင် Speak Out လုပ်ပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မိခင်ကလည်း သားဖြစ်သူရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေတာပါ။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း ပိုင်တံခွန်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် အရင်လို မောင်နှမစုံစုံလင်လင်နဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို မကန်တော့ရတဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းမိကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကလည်း ” မနေ့က အမေ့အိမ်ကိုသွားတော့ ပိန်သွားတဲ့ အမေ့ကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ အရင်လိုမောင်နှမစုံစုံလင်လင်နဲ့ အမေနဲ့အဖေ့ကို မကန်တော့ရတော့ ဝမ်းနည်းချက်က ပြောမပြတတ်ဘူး။
ပိုင်…နင့်ကို အရမ်းသတိရတာပဲ။ အဆင်ရောပြေရဲ့လား?
နင်ရှိရင် ပျော်ရမှာ။ အိမ်ကလည်း ဆူညံနေမှာ။ အခုတော့ တိတ်ဆိတ်ပြီး ပူပင်သောကမျက်နှာတွေနဲ့။ တို့အမေလည်း နေမကောင်းဘူးဟ။
ကိုယ့်မောင်ကို စိတ်ပူတာက တစ်မျိုး၊ အမေ့ကို စိတ်ပူရတာက တစ်မျိုးနဲ့ အိပ်မရတဲ့ရက်တွေလည်း များခဲ့ပြီ။ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ များလွန်းလို့ ကိုယ်ပါ မလဲကျသွားဖို့ အားတင်းထားရတယ်။ ဒီကာလဆိုးကနေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါရစေတော့ဗျာ😔” ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းစွာ နဲ့ ရေး သား ထားတာပါ။
Previous Article ကုသဖို့ ခကျခဲသူမြားအတှကျ အဖုအကြိတျ ပြောကျစတေဲ့မွနျမာဆေးနညျး
Next Article စဈတပျကို သာ အပွညျ့အဝထောကျခံပွီး ဘယျသူ့ကိုမှဂရုမစိုကျ ကွော ငျးအတိအလငျးပွောလိုကျတဲ့ဒိနျးဒေါငျရဲ့(ရုပျသံ)